How to Play Video on TV from USB Pen Driver | OS-UKUBEKA Blog
Idlalwa kanjani Abezindaba Ifayela ku-Smart TV kusukela kusitoreji se-Ipeni Driver
June 17, 2019 ezokuhweba ngekhompyutha Electronics, OS-UKUBEKA, Izincwajana zemininingwane, Imikhiqizo, Ubuchwepheshe 0
Musa nje ngokuthi ngenxa yokuthi ithelevishini has a USB port, kungaba ukudlala amafayela ohlwini Driver Ipeni. Kwezinye icala echwebeni is kuphela yenzelwe ukusetshenziswa onjiniyela abadinga ukusebenzisa isofthiwe ithelevishini, Ngokwesibonelo, ukuvuselela noma ukulungisa isethi. Ezinye amasethi kungenzeka kuphela ukubonisa ividiyo amafayela kanye unike amandla inketho kumenyu inkonzo esingavunyelwe ngokusemthethweni obala ukuze abathengi; unakekele nge amamenyu ezifana nawe kungaphazamisa ukusebenza TV ngokushintsha izilungiselelo service imenyu.
Ngaphambi oxhumanisa idivayisi yakho ku-TV, sicela isipele amafayela akho ukuze zingasivimbi ukuba umonakalo noma ukulahleka kwedatha
Qala ukuxhuma i Kudivayisi sangaphandle (Isitoreji se-USB) >>>
Lapho idivayisi ye-USB ixhunyiwe ku echwebeni USB, umyalezo pop-up lizovela ukuvumela ukuba kalula ukushintshela ku okuqukethwe kwabezindaba egcinwe idivayisi ye-USB.
2. Cindezela inkinobho ye-Ikhaya Control Smart, ukufinyelela Screen Ekhaya.
3. Cindezela inkinobho IKHAYA kude sakho, zulela Umthombo bese ukhetha USB Kudivayisi / Kudivayisi axhunyiwe
4. Khetha amafayela ofuna ukudlala ku-TV
Izakhiwo Ifayela >>>
Uma i-TV yakho ingabe ukwesekwa okungaphezulu kokudlala kwevidiyo kusukela ipeni Driver, isici main esithinta ikhono lakho ukuze ubuke ividiyo oluthile ngefomethi yefayela. Uzodinga uthintane imanyuwali yomsebenzisi noma izinto zokukhangisa for isethi ethile ukuze ubone ukuthi iyiphi Luhlela isekela. Izakhiwo lapho kusekelwa ku amasethi amaningi ahlanganisa MPG, MP4, Divx, Xvid, WMA, futhi AVI, Nokho kujwayelekile ukuba isethi ethile ukusekela kuphela abanye kulolu hlu. Izakhiwo zazo ngezikhathi ezithile asekelwe zihlanganisa MKV (esetshenziswa ngokuvamile ukwabelana ephezulu definition okuqukethwe ku-inthanethi), VOB (amafayela kusetshenziswa ku-DVD) futhi 3GPP (ngesakhiwo esetshenziswa luqhutshwe amadala ngevidiyo amakhamera). Ezinye amasethi ngeke kuphela ukudlala ividiyo ngefomethi asekelwe uma kuba ngokulungiswa ethize noma kwibanga oluthile izinqumo. Zonke lezi ukulinganiselwa kusho kungase kudingeke ukuguqula noma kabusha encode amanye amafayela isiqophi ukuwabuka ngokusebenzisa Ipeni Driver ku isethi yakho ethile.
Thola ulwazi oluthe xaxa – Chofoza lapha
Ubuchwepheshe Injongo Yomphakathi Model Kudivayisi umphathi wedivayisi Samsung processor Nokia ukweseka umshayeli Intel CPU Software HTC Series Driver ukweseka HD Graphics nencazelo zomthetho izilimi Technology_Internet OS-UKUBEKA Umakhala ekhukhwini 64-bit Windows
Injongo Yomphakathi HD Graphics Ubuchwepheshe nencazelo zomthetho Technology_Internet izilimi Samsung Galaxy Umakhala ekhukhwini CPU Model Kudivayisi Intel Server ukweseka umshayeli HTC Intel Nokia Software Qualcomm Samsung umphathi wedivayisi 64-bit Windows Sony Ericsson OS-UKUBEKA Series Driver ukweseka processor Smartphones